トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Kukarukureta nzira, simulation pamusoro wokurarama chikwereti
Wokurarama mbiri hurongwa kuti kuzvitenga nemari ndinoiitawo kufarira pamwedzi kubhadhara. Monthly kubhadhara, kadhi makambani uye zvikwereti kambani unogona kuisa chero nhamba The kupfuura shoma mari uchenjeri Ru uye ini Mangondo. Kana kushandiswa yakawandisa 200,000 Yen zvichidzika, zvakajairika 5000 Yen mwedzi ose uye ane mashoma muripo.
bhuku | wokurarama chikwereti mashandiro
bhuku | wakaiswa sezvo mhando
pamwedzi kubhadhara pamusoro muripo nzira wokurarama chikwereti ari kufarira yake muna 1000 Yen kana
5000 Yen kana kupfuura, zvakatemwa woga It ruripo. Kufarira nguva dzose kuitika mune wokurarama chikwereti. Munenge kufanana kufarira chikwereti, icho hurongwa kuti muchabhadhara mari weboka gare gare kuzotenga nenhumbi ,. Shandisa nomwero, vawanda nokutumwa mwero kuti mari kuti akadzoka nemamwe mashoko, kuburikidza Vakagovana mumazuva 365, zvikawanda nokuda mazuva 30 vachava pamwedzi kufarira mari.
Somuenzaniso, sezvinoita 5,000 Yen pamwedzi kubhadhara, funga zvakaitika kushandisa 200,000 Yen. It ane kosi twasu-mutsetse uri wokurarama zvikwereti pamusoro mhando kuti ndinoiitawo yechimbadzo kuripwa wechikoro. Commission zvazvingava, kuti ariko zvazvingava pagore achava 15%. Ndicho chimbadzo rinoshandiswa nenzira dzinoverengeka wokurarama chikwereti.
rokutanga romwedzi ndiyo 7054 Yen vakatakura Yen 2054 ichifarirwa 5000 Yen, iyo Rakakwanira chikuru mutsividzo zvichabviswa kubhadharwa. Shandisai nengaidzo muna 195,000 Yen, wechikoro acharamba kutapudzwa nokuda 5,000 Yen. Inotevera mwedzi mubereko kubhadhara Yen 7484 Yen 2484, zvinotevera kubhadhara iri Yen mubereko 2342 ndiyo \_ 7362. Zvinoreva kuti
muende kuderedzwa nengaidzo kubudikidza 5,000 Yen pamwedzi, muripo zvichazadziswa muna 40 mwedzi. Muna 40 mwedzi nomwedzi wokupedzisira, kufarira achaita kuderera kusvika 63 Yen. Somugumisiro, mari muna 40 mwedzi mubereko achava 50.914 Yen mu yose. Kunotenga 200,000 Yen, nekuti unoda kuripwa vanenge 5000 Yen kubva 7000 Yen zvishoma mumwe mwedzi, unogona kuona kuti wokurarama mbiri nyore.
muripo munouisa Changing mari mubereko achichinjwawo
uye pamwedzi kubhadhara kungachinja mubereko uyewo zvachinja. Uye ikozvino muenzaniso yaivapo uye akaripira 10,000 Yen, rokutanga romwedzi pa 12.054 Yen, kufarira haachinji nguva 5000 Yen. Izvi yadzikira kufarira zvishoma nezvishoma kubva mwedzi wechipiri. Kufarira inotevera mwedzi, kuti 2420 Yen aiva Yen 2484 apo achidzorerwezve ne 5000 Yen, nokuti mangwana mwedzi akanga \_ 2342 ndiyo \_ 2219. Sezvo
wechikoro acharamba kutapudzwa kubudikidza 10,000 Yen, mubhadharo mumwedzi 20 kupedza, yaipedzerwa kufarira 25.903 Yen, 25,000 Yen achienzaniswa nyaya akabhadhara kwenhambo 40 mwedzi ne 5000 Yen unogona kuva pedyo compression. Nenzira iyi, zvikuru nokuwedzera mwedzi kubhadhara, kufarira vanobhadharwa yose richava duku.
zvemari pfungwa kuteerera
wokurarama chikwereti kuitira kufamba kupenga ndechokuti, nokuti duku rendi, uye chinowanzoitika kukonzera kutsauka pane kugara kubvira mari pfungwa. Mumakore achangopfuura dzakawanda kadhi kambani anopa basa rinonzi "ribonucleic gare gare". Tsanangurai bundu Nemutengo kana ukatenga pachitoro, Website uye runhare kuonana Papera ane hurongwa kuti achinje pane wokurarama chikwereti. The
kadhi kambani, ungacherechedza kuti vakawanda kwemasanga pfungwa-basa kuburikidza wokurarama chikwereti. Kuti ave kutekenyedzwa partnering nomumwe chikwereti chigadzirwa mumwe yakatengwa muna Yakabudiswa, zviri nyore kuti wokurarama chikwereti. Vanhu vasingadi kubhadhara akawanda kufarira wokurarama zvikwereti, kamwe muripo rakanga wokurarama chikwereti, ungada kuti prepayment kana kubhadharwa kana cohesive mari yaigona akavawanira. Sezvo 00D_
kadhi kambani, ungacherechedza kuti vakawanda kwemasanga pfungwa-basa kuburikidza wokurarama chikwereti. Kuti ave kutekenyedzwa partnering nomumwe chikwereti chigadzirwa mumwe yakatengwa muna Yakabudiswa, zviri nyore kuti wokurarama chikwereti. Vanhu vasingadi kubhadhara akawanda kufarira wokurarama zvikwereti, kamwe muripo rakanga wokurarama chikwereti, ungada kuti prepayment kana kubhadharwa kana cohesive mari yaigona akavawanira. . Kuti ave kutekenyedzwa partnering nomumwe chikwereti chigadzirwa mumwe yakatengwa muna Yakabudiswa, zviri nyore kuti wokurarama chikwereti. Vanhu vasingadi kubhadhara akawanda kufarira wokurarama zvikwereti, kamwe muripo rakanga wokurarama chikwereti, ungada kuti prepayment kana kubhadharwa kana cohesive mari yaigona akavawanira. . Kuti ave kutekenyedzwa partnering nomumwe chikwereti chigadzirwa mumwe yakatengwa muna Yakabudiswa, zviri nyore kuti wokurarama chikwereti. Vanhu vasingadi kubhadhara akawanda kufarira wokurarama zvikwereti, kamwe muripo rakanga wokurarama chikwereti, ungada kuti prepayment kana kubhadharwa kana cohesive mari yaigona akavawanira.